पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली हुनेगरी एकता हुन्छ–सुबोधराज शेर्पाली – मुलधार न्युज
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली हुनेगरी एकता हुन्छ–सुबोधराज शेर्पाली
२२ माघ २०७४, सोमबार ११:२४
ने.क.पा.माओवादी(केन्द्र)का केन्द्रिय सदस्य तथा YCL नेपालका माहासचिव सुबोधराज शेर्पाली संग नेपाल न्युज डट प्रेसले गरेको समसामहिक विषयबस्तुमाथिको सम्वाद
– बर्तमान परिस्थितिमा वाइसीएलनेपालले के कस्ता कामहरु गरिरहेका छन् ?
राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएपछि हामी संगठनको सुदृढिकरणको कार्यमा लागिरहेका छौं । प्रदेशहरुको बैठक,भेला सम्मेलन, सदस्यता नविकरण तथा वितरणलगायतको नयाँ युवाहरुलाई माओवादी आन्दोलनमा प्राप्त जुन उदेश्यका साथ युवाहरुलाई आजको प्रविधिसँगको प्रतिस्पर्धा,सामाजिक काम काजमा युवाहरुको सहभागितासहित नीति निर्माणमा युवाको सक्रिय सहभागीताको लागि काम गरिरहेका छौं । विगतको भन्दा परिस्थितिमा केही बदलाव आएकोछ । सोही अनुसारको योजना बनाई संगठनात्मक राजनीतिक कार्यहरु अघि बढाईरहेका छौं ।
–वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
बहुसंख्यक जनताले देशम स्थिर सरकार, स्थायी शान्ति, लामो समयको द्धन्द्धले लथालिङ्ग विकासलाई गति दिई देशको समृद्धी गर्ने,विकराल बेरोजगारीको समस्यालाई स्थायी र पुर्ण बहुमतको सरकारद्धारा समाधान गर्ने मनसाय राखी करिब दुई तिहाई नजिकको मत प्राप्त नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित वाम गठबन्धनलाई दिएका छन् । जहाँसम्म सरकार निर्माणको कुरा छ, त्यो त वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको मताधिकार अनुसार सोचिराख्नु पर्ने कुरा नै होइन, क. केपी ओलीको नेतृत्वमा चाँडै देशले कम्युनिष्ट सरकार प्राप्त गर्छ । यसमा कुनै शंका छैन् ।तर एकाथरी मान्छेहरु भन्ने गर्छन कि कम्युनिष्टहरु आपसमा मिल्दैनन् अन्तत कांग्रेसी र कम्युनिष्ट सम्मिलित बहुमतको सरकार बन्छ भनेर भन्छन् यी सब झुठा हल्लामात्र हुन् ।यसमा कुनै सत्यता छैन । यस्तो गठबन्धन असम्भव छ,किन भने जनताले दिएको जनमत कम्युनिष्ट सरकार गठनको लागि हो । हामी युवाहरुले ती सम्भावनालाई पुर्ण गराउन जोड दिइरहेका छौं । यस अर्थमा सरकार बन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।नबने भन्ने कुरा असम्भव छ ।
–नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बैचारिक रुपमा धेरै असमानताहरु छन्,एउटा बन्दुकमा विश्वास गर्ने पार्टी अर्काे संसदीय ब्यवस्थामा, एकता हुन्छ त ?
पहिलो कुरा त दुवै पार्टीले बन्दुक र संसदीय व्यवस्थामा यतिबेला विश्वास गर्दैनन् । हिजोको सन्दर्भमा भने हो । आज दुवै पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छन् । यहाँ के कुरा प्रष्ट गर्न चाहान्छु भने भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा चुनाव अघिको तालमेल केवल चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि मात्र थिएन,जनताले पनि आफ्नो मत ब्यक्तिका हार जितका लागि मात्र दिएको थिएनन् । वाम गठबन्धनलको विजयसंगै विभिन्न धारमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीहरुको ध्रुविकरणको रणनीतिक योजना पनि थियो । त्यसैले यो एकता अनिवार्य छ, अझ भन्नुपर्दा माओवादी–एमालेको पार्टी एकता देशका लागि अपरिहार्य अनि अनिवार्य भैसकेको छ । यहाँले भने जस्तै हामीबीच थुप्रै वैचारिक खाडलहरु छन् यसरी हेर्दा असम्भव जस्तै पनि लाग्न सक्छ। विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने ०२८सालको विद्रोहको नेतृत्व गरेर स्थापित बनेको एमाले र मुलुक परिवर्तनको लागि ०५२ सालमा जनयुद्ध थालनी गरि बर्तमान नेपालको नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्रबीच रणनीतिक रुपमा केहि भिन्नता भएतापनि कार्यनीतिक रुपमा धेरै कुराहरु मिल्छन् यही तथ्यलाई आधार बनाई एकताको कुरा अघिबढेको हो,धेरै बिषयहरु एकता अघि र पछि पनि बैचारिक बहस गर्दै जान सकिन्छ यसरी हेर्दा एकता गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
–माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेका के कुराहरु एमालेले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा त एकता गर्नु भनेको केहि लिने केहि दिने साझा बुझाई हुनुपर्दछ । मेरो विचारमा आज मुलुकमा स्थापित गरेको एजेण्डा समानुपातिक,समावेशिता, धर्म निरक्षपेता लगायतका सबै माओवादी जनयुद्धले उठाएका र माओवादी नेतृत्वले स्थापित गरेको एजेण्डाहरु हुन् । यसमा अरु दलहरुको पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान त छ तर नेतृत्व भने क.प्रचण्डले गर्नुभयो । तसर्थ माओवादीलाई बढी जिम्मेवारी जान्छ । दोस्रो कुरा एकता गर्ने नै आवश्यकतामा हालको एमाले र माओवादी केन्द्र एक भैसकेपछि पनि जनयुद्ध दिवस, सहिद सप्ताह, जनमुति सेना दिवसलगायत केही महत्वपुर्ण दिवसहरु छन् जुन अहिले माओवादीले उत्सव र स्मरणको दिनहरुको रुपमा पनि मान्दै जानुपर्छ यो भावनात्मक र बैचारिक दुवै कुरा हो भने यी दिनहरुसंग रगत,आँशु र हजारौंको खुसी मिसिएकोे छ ।यो अर्थमा एमालेका कामरेडहरु सहमत हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ । बाँकीविषयहरु एकतापछि सँगै भएर हल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
–माओवादी जनयुद्ध,जनताको बहुदलिय जनवाद, र २१औं शताब्दीको जनवादको बारेमा बहर गर्ने भन्ने चर्चा छ ,के यसमा तपाईहरु जस्ता युवाहरु सहमत हुनुहुन्छ ?
स्वभाविक रुपमा फरक विचार फरक संरचनाका दुई पार्टीहरुबीच एकता गर्दा तमाम विषयहरुम छलफल बहस हुनु स्वभाविक नै मान्नु पर्छ । तपाईले भन्नु भए जस्तो एमालेले मान्दै आएको “जवज” बारे बहस हुन सक्ला, बहस हुन पनि पर्छ । त्यस्तै माओवादीले जनयुद्धकालदेखि नै मान्दै आएको २१आंैं शताब्दीको जनवादको बारेमा बहस गर्नै पर्ला । कुनै बोलेका विषय हुदैनन् दुवै विचारको बारे बहस हुन्छ । तर जनयुद्धको बारे बहस गर्न जरुरी छैन । त्यो इतिहासको एउटा खण्डमा भयो र आज हामी अर्काे अध्यायमा छौं ।हामीलाई जनयुद्धले ल्याएको क्रान्ति,सामाजिक रुपमा यसले ल्याएको उथल पुथलहरु सबैलाई राम्ररी थाहा छ । नेपाली समाज यी उचाइमा पुग्नुमा जनयुद्धको अहम भुमिका छ। त्यसकारण जनयुद्धलाई इतिहासको माग थियो, आवश्यकता थियो ।त्यस बारेमा कुनै बहस हुदैन भन्ने मेरो ठम्याइ हो यसमा अन्य युवाहरुको मत छ ।
–पार्टीको नेताहरुले एकताको लागि भागबण्डा पनि गरिएको भन्ने छ यहाँहरुलाई थाहा छ ? कसरी गर्ने एकता ?
मुख्य कुरा त जनचाहना र आजको आवश्यकता भनेको विभिन्नधारामा विभाजित भएर रहेका कम्युनिष्टहरुको एकीकरण गर्ने कुरा हो । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता गर्ने विषय जे जस्ता कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । मुलत ति ठिकै छन् तर पार्टी एकता भनि सकेपछि त्यो एकताको मर्म र भावना अनुसारको हुन जरुरी छ यसमा सबैका ध्यान पुग्न समेत जरुरी हुन्छ । जहाँ सम्म ७०% एमाले र ३०% माओवादी केन्द्रलाई समेटिने गरि संगठानात्मक एकता गर्ने कुरा छ यो असम्भव छ । जनमतको हिसाबले हामी केही बढी केही कम देखिएता पनि देशको समग्र राजनीतिक एजेण्डा जसमा ०६४ पछिको देशको राजनीति माओवादी पार्टीको एजेण्डाको वरिपरि छ ।तसर्थ संसदीय जोड घटाउ मात्र हैन मुलुकको नेतृत्व गर्ने विचार टिकेको माओवादी पार्टीसँगको एकता सोही सतहबाट सोच्न आवश्यक छ । यसरी हेर्दा बराबरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरि एकता गर्नु आजको आवश्यकता हो ।केही प्रतिशत तलमाथि हुनु अन्यथा हैन तर ३०÷७० भनेर जानु गलत हो भन्ने लाग्छ । एकता कुनै विलय हैन तसर्थ यसले संख्या र प्रतिशत भन्दा पनि एजेण्डासँग ठुलो अर्थ राख्छ ।
–पार्टी एकता पछि केपी ओली र प्रचण्डबीचको जिम्मेवारी के कसरी मिल्न सक्ला ?
यी दुवै नेता गठबन्धन निर्माण गर्ने र देशलाई सम्बृद्धि बनाउने योजना भएका नेताहरु हुन् । समकालीन राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न मुल व्यक्तित्व पनि उहाँहरु नै हुन् । ओली कमरेड प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कमरेड पार्टी अध्यक्ष बनाएर हामी अघि बढ्यौं भने एकजनाले पारदर्शी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्काेले ब्यवस्थित रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हो भने २÷४ दशक नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई पाखा लगाउन कसैले सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । तर एकले अर्काको अस्तीत्व नस्वीकार्ने हो भने उहाँहरु दुई नेतृत्वबीचको अन्तरविरोधमा अरु कसैले नकरात्मक फाइदा लिनेछ । नेपालको राजनीतीमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिराख्नु भएका उहाँहरुबीच जुन सोचाइले गठबन्धनको थालनी गर्नुभयो । त्यही रुपमा पार्टी एकतासम्म पुग्न दुबै पार्टीको नेता कार्यकर्ताले अहम भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो उहाँहरुको जिम्मेवारी मिलाउने र पद बाँडफाँड गर्ने विषयसंग मात्र सम्बन्धित छैन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ब्यवस्थापन गर्ने र दुबै पार्टीको लाखौं पार्टी सदस्य एवंम नेता कार्यकर्ताको उचित ब्यवस्थापन र संरक्षण जुन कुरासंग सम्बन्धित भएकोले सोही उचाइबाट बुझ्नु पर्दछ । त्यसकारण एउटाले पार्टी चलाउने र अर्काेले सरकार चलाएर जानु नै उचित जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ ।
–युवा संघ नेपाल र YCL नेपालबीच एकताबारे छलफल भएको छ कि छैन ?
सामान्यतया माउ पार्टीबीच एकता हुने विषय आइसकेपछि केहि चर्चा परिचर्चा हुनु स्वभाविक हो जस्तो लाग्छ । हामीले कुनै विषयमा संयुक्त बैठक निर्णयहरु गरेका पनि रहेका छौं, तर पार्टी एकता पछि युवा संघ र वाइसी एलको एकता पश्चात सांगठनिक रुपमा ब्यवस्थापन कसरी गर्ने अहिले नै छलफल भैसकेको छैन, हुने कुुरा पनि होइन । तर समय आएसंगै हामी सहज रुपमा दुई संगठनबीचको एकता र जिम्मेवारी मिलान गर्छाै, यो कुरा भने निश्चितका साथ भन्न सकिन्छ ।
–तपाईको पार्टी पटक–पटक सरकारमा गइसकेको छ,फेरी सरकारमा जाने तयारी हुँदै छ, तरपनि YCLले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छ रे,जरुरी छ ?
मैले माथि पनि भनि सकेको छु कि जनयुद्ध नेपाली समाजको रुपान्तरणको लागि आवश्यक थियो । आज पनि त्यसको ऐतिहासिक दिनहरु स्मरण गर्ने र उत्सवको रुपमा मनाउनु स्वभाविक हो । जनयुद्धमा आस्था राख्ने हजारौ शुभचिन्तक,समर्थक अनि नेता कार्यकर्ताको खुशी अनि संघीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बनेको जनयुद्ध थालनीको दिनलाई मनाउनु वाइसीएलको मात्र दायित्व होइन यो त परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने आजका सबै उपलब्धीहरु आत्मासाथ गर्ने सबैले मनाउँदा फरक पर्दैन । तपाई कल्पना गर्नुस त यदि जनयुद्ध थालनी नभएको भए राजतन्त्रको अवस्था के रहन्थ्यो ? परम्परागत संघीयब्यवस्थाले त्यसलाई तह लगाउन सक्दैन थियो । आज म गर्वका साथ भन्न सक्छु जनयुद्धले नै मुलुकलाई लोकतन्त्र दियो, गणतन्त्र दियो, अनि संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान दिनमा समेत योगदान पु¥यायो ।यस अर्थमा हामी युवाहरुले विशेषत वाइसीएल नेपालले जनयुद्ध दिवसलाई महान खुशीको दिनको रुपमा उत्सव मनाउने निर्णय गरेको हो ।
–अन्तमा केही भन्नु हुन्छ कि ?
सबै मिलेर नेपालको सम्बृृद्धी गर्ने हो । एकताबद्ध भएर अघि बढौं देशको उर्जावान युवाशक्तिलाई देशमा नै रोजगारी गर्ने अवसरको सिर्जना गरौं । सम्भावनाको तमाम ढोकाहरु खोल्ने बेला आएको छ भन्ने आशाका साथ सबै अघि बढौं । अब बन्ने कम्युनिष्ट सरकारले देशका आम नागरिकले चाहे अनुसारको काम गर्नलाई पनि सक्ने दुरदृष्टि पुग्न जरुरी छ । हामीले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने जनताको चाहना र सम्बृद्धिको सपना भन्दा ठुलो कुरा केहि हुँदैन । सबैले यी कुराको संकल्प गर्दै देश निर्माणको लागि अघि बढौं । क्षमतावान युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा लगाउनुपर्छ ।